Arzantina, Mitohy Ny Fikarohana Ireo Zafikely Very Tamin’ny Fitondràna Jadona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Janoary 2018 2:23 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, Ελληνικά, Italiano, Deutsch, Français, Nederlands, 繁體中文, Español
Sary an'ny Emergentes nozaraina ho an'ny rehetra tao amin'ny Facebook ary nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Ny 27 Desambra 2017, nambaran'ilay fikambanana tsy miankina ao Arzantina, Abuelas de Plaza de Mayo ny fahitàna ilay zafikely vavy laharana faha-127. I Maria del Carmen Moyano sy Carlos Poblete no zafikely vavy hita farany indrindra, mpikatroka avy amin'ny fikambanana Montoneros izay nisy naka an-keriny ary nanjavona nanomboka tamin'ny fitondràna jadona farany tao Arzantina (1976 – 1983).
Ny mpamoaka vaovao dizitaly Cosecha Roja no milaza fohifohy ny tantaran'ireo ray aman-dreniny ary ny toejavatra nanodidina ny fanjavonan'izy ireo:
Niaraka tamin'ny fahatongavan'ny fitondrana jadona, nanao bemidina tao an-tranonay ny tafika ary nifindra nankany San Juan izy [María del Carmen Moyano], ka tany no nifankahitany tamin'i Carlos Poblete, mpianatra ho injeniera, zokiny 10 taona. “Niarahan'izy roa niainana ny fikatrohana tao anatin'ny fikambanana Montoneros. Enina volana taorian'izay no nanapahan'izy ireo hevitra hiara-mitoetra,” hoy i Estela de Carlotto. Teo anelanelan'ny Aprily sy May 1977, nisy naka an-keriny tao Córdoba i Carlos sy María del Carmen ary nentina tany amin'ilay fonja an-tsokosoko tao La Perla. Efa bevohoka izy tamin'izay.
“Nieta 127″ (zafikely vavy laharana faha-127) dia teraka tany am-pigadràna teo anelanelan'ny May sy Jona 1977 tao amin'ny toeram-piterahana tao amin'ilay fonja an-tsokosokon'ny Navy School of Mechanics (ESMA) – sekoly fiofanan'ny tafika an-dranomasina ny resaka mekanika. 40 taona taty aoriana, nankalazain'ireo dadatoa sy nenitoany ny fanakatonan'izy ireo ny toko iray nanana ny lanjany teo amin'ny fianan'ny fianakaviany, kanefa mijanona ho misokatra hatrany ny ratram-po noho ny tsy fahafantarana ny nanjo ireo ray aman-dreniny.
Nandritra ny fitondrana jadona, novinavinaina ho 30.000 teo ireo olona niharan'ny fanjavonana an-terisetra ary ireo taranany, amin'ny ampahany betsaka, dia noraisin'ny fanjakàna an-tànana tamin'ny alàlan'ny fananganana zaza tsy ara-dalàna sy fahaterahana an-tsokosoko. Mbola ifandirana foana ny tarehimarika, saingy ireo mpiaro zon'olombelona sy ny fikambanana Abuelas de Plaza de Mayo (Renibe ao Plaza de Mayo) — fikambanana iray manokan-tena ho an'ny tolona fikarohana ireo zafikelin'ny nanjavona –dia milaza fa mitombina io isa io.
Tafa ho an'ny mpanao gazety nataon'ireo Abuelas (renibe) noho ny fahitàna ilay zafikely laharana faha #127. Sary nozaraina ho an'ny daholobe tao amin'ny Facebook
Nanatrika tao i Adriana, zafikely vavy laharana faha #126, izay hita andro vitsy monja talohan'ilay tafa ho an'ny mpanao gazety. Tao ihany koa ny roa tamin'ireo nenitoan'ilay zafikely vavy faha 127. Tsy mbola hainy aloha ny teny maha-izy azy ilay zafikely vavy laharana faha 127. Tsy mbola nambara ihany koa ny mombamomba ireo fianakaviana nitaiza azy mba hiarovana ny fiainana manokan'izy ireo. Hoy ny iray tamin'ireo nenitoany tao anatin'ny fahafenoan'ny fihetsehampony:
Holazainay aminy fa tsy misy ahiany. Homenay azy ny fotoana rehetra ilainy mba hizàrana ny zavamisy. 40 taona no nikarohanay azy. Tianay fatratra izy.
Tsy nanakona velively ny hafaliana tamin'io fotoana io ny vaovao momba ny famindràna vao haingana ho aminà fonja mitokamonina an’i Miguel Etchecolaz, ilay lehilahy tomponantoka tamin'ny fakàna ankeriny, fampijaliana, ary famonoana andianà mpianatra tamin'ny lisea, izay lasa fantatra amin'ny anarana hoe Alin'ny pensily.
“Tsy hitsahatra ny hanisa izahay”
Eo ambanin'ny tenifototra #Nieta127, tondraky ny fanehoana hafaliana ny Twitter, ny sasany amin'izy ireny nifangaro hatezerana sy tsy fanekena ny fitsaràna natao an'ireo tomponandraikitra. Asehon'ny sary zaraina any anatin'ny bitsika maro ny soratra an-drindrina ao amin'ny Casa por la Identidad (ilay Tranon'ny Maha-Izy, tantanin'ny Abuelas de Plaza de Mayo) izay toerana itantarana ny toejavatra nisy tamin'ireo fanjavonana an-terisetra nandritra ny fitondrana jadona. Ao anatin'ny lahatsoratra, amin'ny tànana no anisàn-dry zareo ireo zafikely tafaverina indray ho eny anivon'ny fianakaviany:
Ny Tranon'ny Maha-Izy tantanin'ireo Renibe ao Plaza de Mayo, ao amin'ny @espacio_memoria dia efa nahaisa sahady famerenana #Nieta127 Tohizanay ny zavabita sy ny fanantenana! @abuelasdifusion
Teraka tao amin'ny ESMA ny #Nieta127. Afaka ilay mpamoritra / mpampihorohoro, Jorge Luis Magnacco, mpampiteraka tao amin'ny ESMA izay nanatrika ny fahaterahana, rehefa nahavita ny roa ampahatelon'ny saziny.
Tara amin'ny fahatongavana ary farany, nisy valisoa nony farany . Tongasoa ry #Nieta127
Manisa izahay 1 hatramin'ny 127 ary tsy hitsahatra ny hanisa. Misaotra anareo, Abuelas, ary araka ny voalazan'i Estela de Carlotta : “Arahaba nahatratra taona vaovao mandra-pahatongan'ny zafikely manaraka.” #Nieta127 #Feliz2018